Waan Waan laga dhex waday Ra'iisul Wasaaraha xilka haya iyo Musharaxiinta oo guuldareystay - Jowhar somali news leader
Home NEWS Waan Waan laga dhex waday Ra’iisul Wasaaraha xilka haya iyo Musharaxiinta oo...
Dadaalo loogu kala dab qaadayay Ra’iisul Wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Rooble iyo Musharaxiinta Mucaaradka ayaa guuldareystay, kaddib markii caqabado waa weyn ay ka hor-yimaadeen dadaaladaas.
Sida wararku sheegayaan Ergo ay ka mid yihiin Senator Cabdi Qeybdiid, Madaxweynaha Galmudug Axmed Qooqoor iyo xubno kalea ayaa dadaal u galay sidii Ra’iisul Wasaaraha xilka sii haya iyo Midowga Musharaxiin waan waan ay uga dhex sameyn lahaayeen, isla markaana labada dhinac u kulmi lahaayeen.
Dadaaladan xubnahan ay wadeen ayaa bilowga hore ahaa inay kulmaan Midowga Musharaxiinta Mucaaradka iyo Ra’iisul Wasaaraha xilka haya, hase ahaatee ay dhanka Musharaxiinta ay shuruud hor-dhigeen, kaasoo ah in Xukuumadda xilka sii heysa ay raalli gelin ka bixiso wixii dhacay 19 Febraayo.
Sidoo kale shuruuda dhanka Xukuumadda xilka sii heysa wadatay ayaa ahaa in xaalada la qaboojiyo oo Musharaxiinta baajiyaan bannaan baxa ay ku baaqeen jimcaha.
Hase ahaatee waxaa arrinta ay ka adkaatay dhinaca Madaxtooyada oo diiday dalabka Musharaxiinta, waxaana ay ku soo dhamaatay in Xukuumadda xilka sii heysa ay shalay ku dhawaaqday in la joojiyay bannaan baxa ay Musharaxiinta ku dhawaaqeen inuu dhacayo maalinta jimcaha 26 Febraayo.
Ilo ku dhow dhow shirarka labada dhinac loogu kala dab qaadayay ayaa sheegaya in dhanka Ra’iisul Wasaaraha ay wax ka soo dhowaadeen, balse culeyska uu ka yimid dhanka Madaxtooyada.
Xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Muqdisho ayaa laga cabsi qabaa inay isku bedesho rabshado iyo gacan ka hadal, marka loo eego wixii dhacay 19 Febraayo, labada dhinac ayaa wada abaabulo dhinacyo kala duwan leh oo ay ku jirto mid ciidan.
Previous articleThe German court sentences Syria’s former intelligence agent to land
Next articleNo new Covid-19 cases for the second day in a row, says French rugby